UK: R/Wasaare May oo ku eedeysay Moskow sumaynta basaaskii hore Sergey Skripal – Kasmo Newspaper
UK: R/Wasaare May oo ku eedeysay Moskow sumaynta basaaskii hore Sergey Skripal
Updated - March 13, 2018 3:45 pm GMT
London (Kasmo), Ra’iial Wasaaraha Britain, Theresa May ayaa si aan gabbasho lahayn ugu dhawaaqday suuragalnimada Russia in ay ka dambayso sumaynta basaaskii hore Sergei Skripal iyo gabadha uu dhalay Yulia Skripal.
Sumayntu waxay ka dhacday, 4tii March, magaalada yar Salisbury ee koofurta Iglan halkaas oo 10neeyo qof oo kale saaqday waxyeelladeedu. Baaritaan laga sameeyay Shaybaarka Militariga Britain waxaa lagu ogaaday nooca suntan la isticmaalay oo ka tirsan bahda Gaasta Nervine ee loo yaqaanno ‘Novichok’ ee lagu farsameeyo Russia.
Ra’iisal Wasaare May ayaa caddeysay in ay jiri karaan 2 arrimood oo suuragal ah midkood: tillaabo cad oo Cremlin ka dambayso ama Cremlin oo hubkeedii kiimikada aha aka baxay gacanteeda, dad kalena isticmaaleen.
Iyada oo Barlamaanka ka siinaysa warbixinta dhacdada, May waxay caddeysay in Wasiirka Arrimaha Dibadda, Boris Johnson uu u yeeray safiirka Ruushka si uu uga jawaabo su’aalaha xukuumadda 24 saac gudahood.
Iyada oo ay ku xirantahay hadba sida ay noqoto jawaabta Moskow, May waxay maalinta Arbacada berri ah ku soo laaban doontaa Barlamaanka si ay ugu sheegto go’aankeeda. ‘Haddii sharraxaadda Safiirku inala noqon waayaan qaar lagu qanci karo waa in aynu falkaas u qaadanno Russia oo dagaal sharcidarro ah ku soo qaadday Britain’ ayey tiri..
Dhanka kale Madaxweyne Putin oo olole doorasho ku jira, mar uu jawaab siiyay wariye BBC ka tirsan wuxuu u sheegay: ‘Marka hore baaritaanka ka soo salgaara, kaddib Ayaan ka ada hadli doonnaa’.
Laakiin 2da dal ayaa u muuqanaya in ay cagaha la sii galayaan qalalaaso kale o oculus oo ssuuragalin kara xayiraado adag iyo dibolomaasiyiin la eryo, si la mid ah ama ka daran 2006dii. Markaas oo kiis la mid ah lagu khaarajiyay basaaskii hore ee KJP, Alexander Litvinenko, oo London lagu sumeeyay, taas oo Dawning Street u saarisay Dawladda Russiya.